20th နှစ်မြောက်ကင်ပိန်း - ကြှနျုပျတို့£ 60k ပန်းတိုင်ရောက်ရှိပြီ!
အားဖြင့် SarcoidosisUK | အောက်တိုဘာလ 1, 2018 | အားလုံးရေးသားချက်များ, သတင်းအချက်အလက်, သုတေသန, SarcoidosisUK
အဆိုပါ SarcoidosisUK 20th နှစ်မြောက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး£ 63000 ကျော်ကြီးပြင်းခဲ့သည်! ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော် SarcoidosisUK ၏အံ့သြဖွယ်အလုပ်ဆင်နွှဲဖို့ဖန်တီးကျွန်ုပ်တို့၏ 20th နှစ်မြောက်ကင်ပိန်း, တရားဝင်အနီးကပ်မှရောက်လေပြီ။ တစ်ဦးကလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျနော်တို့£ 60,000 တစ်ခုရည်မှန်းချက်ကြီးပစ်မှတ်ထားကြ၏။ ကျနော်တို့ ...
အဖွင်ကွန်ဂရက်, ပဲရစ်မှာ SarcoidosisUK ကနေမီးမောင်းထိုးပြထားသည်
အားဖြင့် SarcoidosisUK | စက်တင်ဘာ 19, 2018 | အားလုံးရေးသားချက်များ, အသိအမြင်, ဖြစ်ရပ်များ, သတင်းအချက်အလက်, သူနာပြုတိုင်ကြားမှု, သုတေသန, SarcoidosisUK
SarcoidosisUK (အဖွင်) သည်ဥရောပအသက်ရှုလမ်းကြောင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ sarcoidosis လူနာကိုယ်စားပဲရစ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးကွန်ဂရက် 2018 "ဒါဟာ sarcoidosis လူနာလူနာအဖွဲ့အစည်းများ, Clinician နှင့်တွေ့ဆုံ,4ရက်အတွင်းကျော်တစ်ဦးအပြည့်အဝလူမှုအဖွဲ့အစီအစဉ်ကိုခဲ့ပြီ ...
Sarcoidosis လူနာ - သင်၏ကျန်းမာရေးအွန်လိုင်းတိုင်း
အားဖြင့် SarcoidosisUK | သြဂုတ် 8, 2018 | အားလုံးရေးသားချက်များ, ပါဝင် Get, သုတေသန, Sarcoidosis သတင်းများ, SarcoidosisUK, Uncategorized, ဝက်ဘ်ဆိုက်
ရှငျဘုရငျ၏ Sarcoidosis မေးခွန်းလွှာ Sarcoidosis အထူးသဖြင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောလူနာသက်ရောက်သည်။ အတိုင်ပင်ခံ sarcoidosis သူတို့ရဲ့ဘဝလူနာရဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်အရည်အသွေးကိုထိခိုက်စေလျက်ရှိသည်ပုံကိုသိရန်အဘို့အထို့ကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲသည်။ SarcoidosisUK ရှိတယ် ...